एसीसी क्यालेन्डर सार्वजनिक : नेपाललाई छनोटमा मौकै-मौका ! [क्यालेन्डर सहित]
साउन ३०, २०७६ PS
काठमाडौं – एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) ले सन् २०२० को लागि आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक क्यालेन्डरअनुसार नेपालको सिनियर, उमेर र महिला टोलीले विभिन्न प्रतियोगिताको छनोट खेल खेल्नुपर्ने छ । नेपालले क्वालिफायरमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे भारत सहित ५ एसियाली टेष्ट राष्ट्रसँग खेल्न पाउने छ ।
पुरुष सिनियर टोलीको तालिका
एसीसीले फेबुअरीमा वेस्टर्न रिजन टि-२० छनोट आयोजना गर्नेछ । वेस्टर्न रिजनमा बहराइन, इरान, कुवेत, माल्दिभ्स, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र युएई रहेका छन् । विजेता टोली अगष्टमा हुने एसिया टि२० क्वालिफायर खेल्न पाउने छ । उक्त प्रतियोगिता कुन देशमा हुने त्यो भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।
मार्चमा थाईल्यान्डमा ईस्टर्न रिजन टि२० प्रतियोगिता हुने छ । प्रतियोगितामा आयोजक थाईल्यान्ड सहित नेपाल, भुटान, चीन, मलेसिया, म्यानमार, हङकङ र सिंगापुर छन् । शीर्षस्थानमा रहने टोलीले अगष्टमा मलेसियामा हुने टि२० क्यालिफायरमा सहभागिता जनाउन पाउने छ ।
क्वालिफायरमा इस्टर्न र वेस्टन रिजनका विजेता सहित अन्य दुई टोली गरि कुल ४ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । जसबाट विजेता टोलीले सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप टि२० क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाउने छ । एसिया टि२० एक क्वालिफायर भएर आएको टिमसँगै भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
त्यस्तै आईसीसीको एक दिवसिय वरीयतामा एसियाको तर्फबाट टेष्ट राष्ट्र बाहेक अन्य शीर्ष ३ स्थानमा रहने टोलीले डिसेम्बरमा भारतमा हुने इमरर्जिङ एसिया कप खेल्न पाउने छन् । जुन ५० ओभरको हुने छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान सहित एसियाका आईसीसीको शीर्ष ३ वरीयतामा रहेका टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
महिला टोलीलाई पनि अवसर
महिला टोलीलाई पनि टेष्ट राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर छ । मलेसियामा जुनमा महिला एसिया टि २० क्वालिफायर हुने छ । यस छनोटमा ८ टोलीको सहभागिता रहने छ । तर सहभागि टोलीको एसीसीले नाम खुलाएको छैन ।
इस्टर्न र वेस्टन रिजनबाट ४ तथा एसीसीले अन्य ४ टोलीलाई सोझैं मौका दिने छ । फाइनलमा पुग्ने टोलीले सेप्टेम्बरमा बंगलादेशमा हुने महिला एसिया कप खेल्ने छन् । जसमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र क्वालिफायरको फाईनलमा पुगेका टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
नोभेम्बरमा यू१९ एसिया कप
सन् २०२० को यू१९ एसिया कप यूएईमा हुने छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान सहित इस्टर्न रिजनबाट दुई र वेस्टन रिजन २०१९ को विजेताबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, साउन ३०, २०७६१२:२४
फिफा वर्ष खेलाडी अवार्डमा मेस्सी र रोनाल्डोलाई भान डाइकको चुनौती ! कसले मार्ला बाजी ?